XPS လို ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ဒီဇိုင်းလှပတဲ့ Laptop သုံးမျိုး မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Dell
29 Aug 2018 . 3:32 PM
IFA 2018 နည်းပညာ ပြပွဲမှာ Dell မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Laptop အသစ်တွေကို ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ရင် XPS လားလို့ အထင်မှားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ခပ်ထူထူ ပလတ်စတစ် ဘော်ဒီအစား ပိုပါးလွှာတဲ့ သတ္ထုကိုယ်ထည် ပြောင်းသုံးထားလို့ XPS မော်ဒယ်အသစ်လို့တောင် ထင်မိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဒီဇိုင်းပိုင်း ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး Performance ပိုကောင်းတဲ့ 8th Generation Intel Processor နဲ့ အားဖြည့်လိုက်သလို စမတ်ဖုန်းတွေရော Laptop တွေမှာပါ ခေတ်စားလာနေတဲ့ ဘေးဘောင်မဲ့ Display Inspiron မော်ဒယ် တွေမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါပြီ။
Beautiful & Stunning Display
2-in-1 Inspiron 5000 & 7000 Series
အခုလို သိသာထင်ရှားတဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုအပြင် Inspiron 5000 & 7000 Series အသစ်မှာ အပူစွန့်ထုတ်မှု ပိုအားကောင်းတဲ့ Thermal Design အသုံးပြုထားပါပြီ။ Dell အဆိုရ Laptop Mode နဲ့သုံးသုံး Tablet Mode နဲသုံးသုံး လေပူမှုတ်ထုတ်ရ ပိုလွယ်အောင် အပူစုပ်ပိုက်တွေကို Laptop ရဲ့ ၃၆၀ ဒီဂရီ အနေထားတိုင်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အားသာချက် နောက်တခုက Windows 10 မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Standby Feature ကို Fingerprint Sensor နဲ့ အဆင့်မြှင့်လိုက်ပြီး ဘက်ထရီ အားနည်းနေလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပျူတာဖွင့်ဖို့ ပါဝါခလုတ်နှိပ်စရာ မလိုဘဲ Scanner နဲ့ ချက်ချင်းဖွင့်လို့ရအောင် Software ပိုင်း Upgrade လုပ်ထားတဲ့အချက်ပါ။
Scanner along with power button
နောက်ပြီး USB-C Port ကို အားသွင်းဖို့အတွက်ရော Display Port အနေနဲ့ပါ သုံးလို့ရသလို Alexa Assistant နဲ့ ချိတ်ဆက် လို့ရသေးတဲ့ အချက်တွေက Inspiron စီးရီး Laptop တွေမှာ ပထမဆုံး ပါဝင်လာတဲ့ အားသာချက်ပါ။ Inspiron 7000 စီးရီးတွေမှာ ၁၃ လက်မ၊ ၁၅ လက်မနဲ့ ၁၇ လက်မ ဆိုပြီး Laptop သုံးမျိုးရွေးချယ်လို့ ရသလို အသေးဆုံး ၁၃ လက်မမော်ဒယ်မှာ USB-C Port နဲ့ USB-A Port တခုစီပဲ ပါဝင်သလို HDMI 2.0 Port နဲ့ microSD Slot တခုစီ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁၅ လက်မနဲ့ ၁၇ လက်မ တွေမှာတော့ USB-A Port အပိုပါလာပြီး Full Size SD Card Reader ပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လက်မပိုကြီးတဲ့ Inspiron 7000 မော်ဒယ်နှစ်မျိုးမှာ MX130 နဲ့ MX150 ဆိုပြီး Nvidia ကတ်တွေ ရွေးချယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
The Same XPS like Design
Inspiron 5000 မော်ဒယ်ကို ၁၄ လက်မ တမျိုးပဲ ထုတ်မှာဖြစ်သလို အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့ကျရင် ဒေါ်လာ ၆၀၀ နဲ့ ရောင်းချသွားမှာပါ။ 7000 စီးရီး မော်ဒယ်တွေကိုတော့ ဒေါ်လာ ၈၅၀ ဈေးခင်းထားပြီး အမြင့်ဆုံး ဒေါ်လာ ၁၁၀၀ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီ Inspiron မော်ဒယ်အားလုံးမှာ Black Edition ဆိုပြီး နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၄၀၀ ထပ် သုံးလိုက်ရင် ငွေရောင်ကိုယ်ထည်အစား အနက်ရောင် Inspiron တလုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် ရွေးချယ်မှုရှိပါသေးတယ်။
Plenty of Ports (Hello! Alexa)
ဒီလို Windows Laptop ပြီးသွားလို့ ရုံးသုံး၊ ကျောင်းသုံး Chromebook တလုံးကို စတိုင်ကျကျ၊ ဒီဇိုင်းလှလှ သုံးချင်သေးတယ်ဆိုရင် Dell မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Chromebook အသစ်က ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်နေဦးမှာပါ။ Samsung ထုတ် Chromebook လို Stylus Slot တခု Metal Keyboard အောက်ဖက်မှာ ထည့်သွင်းထားပြီး Touch စနစ်အသုံးပြုထားတဲ့ Full HD Display ပါဝင်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကို Intel Core i3 Processor ၊ 4GB RAM နဲ့ 128GB SSD Storage သုံးပေးထားပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ကျရင် ဒေါ်လာ ၆၀၀ နဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာပါ။
A Chromebook with Stylus Support
XPS လို ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး ဒီဇိုငျးလှပတဲ့ Laptop သုံးမြိုး မိတျဆကျလိုကျတဲ့ Dell
IFA 2018 နညျးပညာ ပွပှဲမှာ Dell မိတျဆကျလိုကျတဲ့ Laptop အသဈတှကေို ရုတျတရကျ မွငျလိုကျရငျ XPS လားလို့ အထငျမှားသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာ ခပျထူထူ ပလတျစတဈ ဘျောဒီအစား ပိုပါးလှာတဲ့ သတ်ထုကိုယျထညျ ပွောငျးသုံးထားလို့ XPS မျောဒယျအသဈလို့တောငျ ထငျမိသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလို ဒီဇိုငျးပိုငျး ပွောငျးလဲလာခဲ့ပွီး Performance ပိုကောငျးတဲ့ 8th Generation Intel Processor နဲ့ အားဖွညျ့လိုကျသလို စမတျဖုနျးတှရေော Laptop တှမှောပါ ခတျေစားလာနတေဲ့ ဘေးဘောငျမဲ့ Display Inspiron မျောဒယျ တှမှော ပါဝငျလာခဲ့ပါပွီ။
အခုလို သိသာထငျရှားတဲ့ အဆငျ့မွှငျ့တငျမှုအပွငျ Inspiron 5000 & 7000 Series အသဈမှာ အပူစှနျ့ထုတျမှု ပိုအားကောငျးတဲ့ Thermal Design အသုံးပွုထားပါပွီ။ Dell အဆိုရ Laptop Mode နဲ့သုံးသုံး Tablet Mode နဲသုံးသုံး လပေူမှုတျထုတျရ ပိုလှယျအောငျ အပူစုပျပိုကျတှကေို Laptop ရဲ့ ၃၆၀ ဒီဂရီ အနထေားတိုငျး တညျဆောကျထားပါတယျ။ အားသာခကျြ နောကျတခုက Windows 10 မှာ ပါဝငျလာတဲ့ Standby Feature ကို Fingerprint Sensor နဲ့ အဆငျ့မွှငျ့လိုကျပွီး ဘကျထရီ အားနညျးနလေို့ဖွဈဖွဈ၊ ကှနျပြူတာဖှငျ့ဖို့ ပါဝါခလုတျနှိပျစရာ မလိုဘဲ Scanner နဲ့ ခကျြခငျြးဖှငျ့လို့ရအောငျ Software ပိုငျး Upgrade လုပျထားတဲ့အခကျြပါ။
နောကျပွီး USB-C Port ကို အားသှငျးဖို့အတှကျရော Display Port အနနေဲ့ပါ သုံးလို့ရသလို Alexa Assistant နဲ့ ခြိတျဆကျ လို့ရသေးတဲ့ အခကျြတှကေ Inspiron စီးရီး Laptop တှမှော ပထမဆုံး ပါဝငျလာတဲ့ အားသာခကျြပါ။ Inspiron 7000 စီးရီးတှမှော ၁၃ လကျမ၊ ၁၅ လကျမနဲ့ ၁၇ လကျမ ဆိုပွီး Laptop သုံးမြိုးရှေးခယျြလို့ ရသလို အသေးဆုံး ၁၃ လကျမမျောဒယျမှာ USB-C Port နဲ့ USB-A Port တခုစီပဲ ပါဝငျသလို HDMI 2.0 Port နဲ့ microSD Slot တခုစီ ပါဝငျပါတယျ။ ၁၅ လကျမနဲ့ ၁၇ လကျမ တှမှောတော့ USB-A Port အပိုပါလာပွီး Full Size SD Card Reader ပါဝငျပါတယျ။ နောကျပွီး လကျမပိုကွီးတဲ့ Inspiron 7000 မျောဒယျနှဈမြိုးမှာ MX130 နဲ့ MX150 ဆိုပွီး Nvidia ကတျတှေ ရှေးခယျြနိုငျပါသေးတယျ။
Inspiron 5000 မျောဒယျကို ၁၄ လကျမ တမြိုးပဲ ထုတျမှာဖွဈသလို အောကျတိုဘာလ ၂ ရကျနကေ့ရြငျ ဒျေါလာ ၆၀၀ နဲ့ ရောငျးခသြှားမှာပါ။ 7000 စီးရီး မျောဒယျတှကေိုတော့ ဒျေါလာ ၈၅၀ ဈေးခငျးထားပွီး အမွငျ့ဆုံး ဒျေါလာ ၁၁၀၀ သတျမှတျထားပါတယျ။ ဒီ Inspiron မျောဒယျအားလုံးမှာ Black Edition ဆိုပွီး နောကျထပျ ဒျေါလာ ၄၀၀ ထပျ သုံးလိုကျရငျ ငှရေောငျကိုယျထညျအစား အနကျရောငျ Inspiron တလုံး ပိုငျဆိုငျနိုငျမယျ့ ရှေးခယျြမှုရှိပါသေးတယျ။
ဒီလို Windows Laptop ပွီးသှားလို့ ရုံးသုံး၊ ကြောငျးသုံး Chromebook တလုံးကို စတိုငျကကြ၊ ဒီဇိုငျးလှလှ သုံးခငျြသေးတယျဆိုရငျ Dell မိတျဆကျလိုကျတဲ့ Chromebook အသဈက ရှေးခယျြစရာ ဖွဈနဦေးမှာပါ။ Samsung ထုတျ Chromebook လို Stylus Slot တခု Metal Keyboard အောကျဖကျမှာ ထညျ့သှငျးထားပွီး Touch စနဈအသုံးပွုထားတဲ့ Full HD Display ပါဝငျပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးကို Intel Core i3 Processor ၊ 4GB RAM နဲ့ 128GB SSD Storage သုံးပေးထားပွီး အောကျတိုဘာလ ၂၃ ရကျနကေ့ရြငျ ဒျေါလာ ၆၀၀ နဲ့ ရောငျးခပြေးသှားမှာပါ။